LHRH-A3 maka Ọgwụ Bovines & ezì - China Ningbo Second Ókè mmiri ọgwụ
LHRH-A3 maka Ọgwụ Bovines & ézì
Luteinizing Ókè mmiri ọgwụ insulin Ókè mmiri ọgwụ A3 maka Ọgwụ (LHRH-A3) (Trade aha: Zaizaiduo) Nke a Corporation bụ naanị emeputa enwe gafere GMP asambodo n'ụlọ na okwu nke ngwaọrụ maka Luteinizing Ókè mmiri ọgwụ insulin homonụ A3. [Description] Ngwaahịa a bụ ọcha ifriizi-Fikiere nkanka ma ọ bụ ntụ ntụ. [Function na ojiji] Polypeptide hormone ọgwụ. Ọ nwere ike na-akwalite anụmanụ ihu pituitary ka secrete luteinizing hormone (LH) na follicle-akpali akpali hormone (FSH), adịru maturi ...
L uteinizing H ormone R eleasing H ormone A 3 maka Ọgwụ (LHRH-A 3 )
(Trade aha: Zaizaiduo)
Nke a Corporation bụ naanị emeputa enwe gafere GMP asambodo n'ụlọ in terms of the raw materials for Luteinizing H ormone R eleasing H ormone s A 3.
Ngwaahịa a bụ na-acha ọcha ifriizi-Fikiere nkanka ma ọ bụ ntụ ntụ.
[Function na ojiji]
Polypeptide hormone ọgwụ. Ọ nwere ike na-akwalite anụmanụ ihu pituitary ka secrete luteinizing hormone (LH) na follicle-akpali akpali hormone (FSH), adịru okè nke ovarian follicles na-akwalite ovulate. Ọ nwere ike ọ bụghị naanị na ozugbo hapụ hormone synthesized site pituitary gland, ma na-akpali njikọ nke hormone. Ọ nwere ike na-akwalite spermatogenesis nwoke ụmụ anụmanụ.
Ọ na-ejikarị to:
1. Mma na-awụba n'oké osimiri size;
2. Mma na ime ọnụego n'oge estrum;
3. emeso ogbenye okè nke follicles, na-egbu oge ovulation na follicular cysts;
4. Meenụ mmetụta nke ibu-ovulation;
5. Meenụ ọrụ nke corpus luteum.
[ U sage na Ọnụọgụ ọgwụ]
Mgbe agbara, ọ ga-diluted na akpali mmasị mmiri maka ọgwụ ma ọ bụ igba ogwu na saline mmiri.
I. Ngwa na Ehi amụba
1. E mweghachi nke ovarian ọrụ na shortening na calving nkeji: intramuscular ntụtụ 5-15μg n'ime 8-18 ụbọchị mgbe nnyefe; otu ugboro n'ụbọchị 3 consecutive ụbọchị.
2. Rụọ ime ọnụego: a. intramuscular ntụtụ 25μg n'oge mating ike budata melite ime ọnụego na estrum; b. intramuscular ntụtụ 25μg banyere 40 ụbọchị mgbe nnyefe, intramuscular ntụtụ 0.2mg nke Ntuziaka Nne na Nna na otu nkeji nke 6 ụbọchị, na intramuscular ntụtụ 20μg ọzọ nkeji nke otu ụbọchị nwere ike doro anya na mma na ime ọnụego n'ime 60 ụbọchị mgbe nnyefe.
3. Ọgwụgwọ nke follicular maldevelopment na-egbu oge ovulation: intramuscular ntụtụ 25-30μg n'oge mating ma ọ bụ 2 awa tupu mating.
4. Ọgwụgwọ nke multi-follicle development: intramuscular ntụtụ 25μg ụbọchị ọ bụla maka 3 consecutive ụbọchị.
5. Ọgwụgwọ nke ovarian cysts: intramuscular ntụtụ 25μg kwa ụbọchị maka 5 consecutive ụbọchị intramuscular ntụtụ 100mg nke progesterone na dịgodị; iji gbochie nlọghachite, progesterone ga-agbara maka otutu ugboro ọnwa atọ mgbe ime.
II. Ngwa Porcine amụba
1. Ime ka afọ ime ọnụego na-awụba n'oké osimiri size of aghakwa mkpụrụ na estrum: intramuscular ntụtụ 25-50μg 0-4 awa tupu mating mgbe estrus emee ka aghakwa mkpụrụ nwere ike dịkwuo nkezi-awụba n'oké osimiri size of aghakwa mkpụrụ site karịrị 2 isi.
2. Low agụụ mmekọahụ nwoke ezì: 25μg kwa ụbọchị maka 3-5 consecutive ụbọchị.
III. Ngwa Atụrụ amụba
Mgbe lekwasịrị nne malitere nkịtị estrus, intramuscular ntụtụ 5-10μg nke ngwaahịa a ga-ekenịmde ozugbo, mating ga-emejuputa atumatu 4-6 awa ka e mesịrị (ma ọ bụrụ na ndị nne bụ na estrus, 0.5-1ml nke atọ n'ime otu-hormone nwere ike ịbụ eji maka onye ọ bụla-nne na-akwalite estrus). Ọ bụrụ na ntụziaka a na-sochirinụ, ndị twinning ọnụego ewu ga-abakwa ụba budata, na-awụba n'oké osimiri size atụrụ ga-abakwa ụba.
IV. Ngwa Other Domestic Animals
Mmejuputa intramuscular injection n'oge mating ma ọ bụ ọtụtụ awa tupu mating ka mma ime ọnụego na-awụba n'oké osimiri size: 15μg kwa ele; 3-5μg kwa oke bekee; 15μg kwa nkịta ma ọ bụ nkịta ọhịa; 5μg kwa anụmanụ maka anụ.
Ogologo oge na elu doses nke ngwa ga-eme ka heterogeneous mmetụta, ya bụ doro anya inhibitory mmetụta.
N'ozuzu, ọ bụla ọzọ ụdị hormone ga-eji mgbe ngwaahịa a na-eji.
Shaded na airtight; echekwara n'okpuru okpomọkụ nke 20 ℃.
[Okwu nke Ndaba]
[Ndọrọ ego Oge]
Ọ dịghị ndokwa
Previous: LHRH-A2 maka Ọgwụ Bovines & ézì
Osote: Oxytocin Ọgwụ (Pitocin)
Lhrh-A3 N'ihi ọgwụ Bovines & ezì
Cloprostenol sodium Ọgwụ (Ntuziaka Nne na Nna)
Gonadotropin maka Ọgwụ (GnRH)
Posterior Pituitary Ọgwụ
Pituitary Follicle ume Ókè mmiri ọgwụ maka Inje ...
Viatamin AD maka Ọgwụ